एउटा मान्छेले दिनमा कति पानी पिउने ? :: a1nepal.com.np
एउटा मान्छेले दिनमा कति पानी पिउने ?
स्वस्थ शरीरका लागि पानी सेवन गर्नु निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर, एक दिनमा पानी कति पिउने भन्ने विषयमा भने विज्ञहरूका फरक–फरक मत पाइन्छन् । धेरैजसोको बानी हुन्छ कि पानी नै नपिउने वा तिर्खा लागेको समयमा एकैपटक धेरै पिउने । यसरी एकैपटक धेरै पानी पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि पक्कै राम्रो मानिँदैन । यसले गम्भीर खालको समस्या पनि ल्याउन सक्छ । धेरै पानी पिउँदा हाइपोनट्रेमिया रोग पनि लाग्न सक्छ । हाइपोनट्रेमिया रगतमा सोडियमको मात्रा कम भएर लाग्न सक्छ । शरीरलाई आवश्यकभन्दा धेरै पानी हुँदा पिसाबबाट धेरै नुनको मात्रा छोटो समयमा बाहिर जान्छ । धेरै पानी छोटो समयमा छान्नुपर्दा किड्नीलाई पनि असर पर्न सक्छ ।
एक दिनमा पानी यति नै पिउनुपर्छ भन्ने खासै नियम छैन । तर, आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा भने पिउनु लाभदायक हुन्छ । प्रत्येक मानिसको शारीरिक बनावटअनुसार पानीको मात्रा पनि फरक–फरक आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया प्यास लाग्दा पानी पिउने गरिन्छ । कुनै मानसिक थकान वा मानसिक रूपमा तनाव हुँदा पनि छिनछिनमा पानी पिउन मन हुन्छ । त्यसैले यस्तो समयमा दिनमा धेरैपटक गरेर पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । एकपटकमा सकेसम्म दुई गिलासभन्दा बढी पानी नपिउँदा ठीक हुन्छ । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनअनुसार युवा उमेरका पुरुषलाई दिनमा तीन लिटर पानी पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाले भने २ दशमलव २ लिटर पानी पिउनु उत्तम हुन्छ ।
आफ्नो शरीरमा पानी पुगेको छ/छैन भन्नेबारे पिसाबबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हलुका पहेँलो रङको पिसाबलाई सामान्य मानिन्छ । यदि पिसाब गाढा पहेँलो या सुनौलो रङको छ भने पानीको मात्रा नपुगेको भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । यस्तो वेला पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ पिसाबको रङ हेरेर पानी पुगेको नपुगेको पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । भिटामिन बी कम्प्लेक्सजस्ता औषधि सेवन गर्दा पनि पिसाबको रङ गाढा पहेँलो देखिन सक्छ । यसका साथै अन्य केही औषधिहरू सेवन गर्दा पिसाबको रङ परिवर्तन हुन्छ । जब हामी धेरै कसरत गर्छोैँ सो समयमा शरीर धेरै तातो हुन्छ । त्यतिवेला तुरुन्त पानी पिउनु राम्रो हुँदैन । यदि पिउनैपर्ने भएमा पनि दुई गिलासभन्दा बढी सकेसम्म नपिउनु नै फाइदाजनक हुन्छ ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै एक या दुई गिलास पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि खाना खानुभन्दा करिब आधा घन्टाअघि पानी पिउनु उचित हुन्छ । खाना खाएको एक घन्टापछि पानी खाने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, खाजा खानुभन्दा आधा घन्टाअघि र खाजा खाएको एक घन्टापछि पनि पानी पिउनुपर्छ । राति पनि खाना खानुभन्दा आधा घन्टाअघि र खाना खाएको एक घन्टापछि पानी पिउनु अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । खानासँग पानी पिउनु राम्रो हुँदैन ।
गर्मी मौसममा शरीरको तापक्रम सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी नै हुन्छ । जसले गर्दा झाडा–बान्ता तथा डिहाइड्रेसनजस्ता समस्या हुन सक्छ । स्वस्थ मानिसको शरीरमा सामान्य तापमान ३७ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । यदि शरीरको औसत तापक्रम बढ्न थाल्यो भने विभिन्न अंगमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले गर्मी मौसममा खानपिन गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि गर्मी मौसममा दहीको सेवन निकै लाभदायक हुन्छ । बजारमा पनि सजिलै पाइने दहीको सेवनले शरीरलाई भित्रैदेखि शीतलता प्रदान गरेर गर्मीबाट जोगाउँछ । दहीलाई आफ्नो चाहनाअनुसार खानासँगै या फलफूललाई स–साना टुक्रा बनाएर दहीमा राखेर पनि खान सकिन्छ ।
एक दिनमा पानी यति नै पिउनुपर्छ भन्ने खासै नियम छैन । तर, आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा भने पिउनु लाभदायक हुन्छ । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनअनुसार युवा उमेरका पुरुषलाई दिनमा तीन लिटर पानी पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तै, महिलाले भने २ दशमलव २ लिटर पानी पिउनु उत्तम हुन्छ ।
मोही या लस्सी
दहीको लस्सी बनाएर खाँदा पनि शक्तिका साथै शीतलता प्राप्त हुन्छ । दहीलाई फिटेर बनाइने मोही गर्मी महिनामा निकै लाभदायक हुन्छ । तर, मोही भने सकेसम्म ताजा नै सेवन गर्नुपर्छ । स्वाद पाउनका लागि धनियाँको पात, जिराको पाउडर तथा नुन पनि मिसाउन सकिन्छ । मोही मन नपराउनेहरूले भने दहीलाई नै फिटेर थोरै पानी या चिनी मिसाएर स्वादिलो लस्सी पनि बनाउन सकिन्छ ।
काँक्रामा अत्यधिक मात्रामा पानी तथा पोषक तत्व हुन्छ । धेरै व्यक्तिले काँक्रालाई सलादका रूपमा सेवन गर्छन् । गर्मी मौसममा स्वस्थ रहन दैनिक काँक्रा खानु लाभदायक नै हुन्छ । काँक्रालाई चिरेर चार टुक्रा बनाई नुन तथा खुर्सानी लगाएर खानु निकै स्वादिलो पनि हुन्छ । गर्मीले गर्दा निकै तनावको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने काँक्राको जुस निकै लाभदायक हुन्छ ।
नेपालीहरूको प्रिय पेय पदार्थ चिया भए पनि गर्मीको मौसममा त्यति फाइदाजनक मानिँदैन । चिया पिउने लत परिसकेकाहरूका लागि गर्मी मौसममा उत्तम विकल्प लेमन आइस टी हुन सक्छ । यसलाई पिउँदा चियाको स्वाद त पाइन्छ नै, साथमा शीतलता र भिटामिन सी पनि शरीरलाई प्राप्त हुन्छ ।
गर्मीमा खरबुजा खानु धेरै नै फाइदाजनक मानिन्छ । खरबुजा र त्यसको बिउले शरीरलाई स्फूर्ति प्रदान गर्नुका साथै यसमा पाइने लाइकोपिनले मुहारलाई पनि चमक प्रदान गर्छ । यसले रक्तचापलाई नियन्त्रण पनि गर्छ । यसलाई चाहनाअनुसार काटेर सीधै खान पनि सकिन्छ र जुस पनि बनाउन सकिन्छ । यसको रस एसिडिटी, मुटुको रोग, डायबिटिज, लुजस्ता बिरामीका लागि फाइदाजनक छ ।
उखुको रस सेवन गर्दा तुरुन्तै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा आइरन हुने कारण रगतको कमीका कारण हुने समस्यालाई समाधान गर्छ । उखुको रसले शरीरलाई सुक्खा हुन दिँदैन । त्यस्तै, यसको रसले शरीरको तापक्रम घटाउन पनि सहयोग गर्छ । तर, राम्रोसँग सफा गरी बनाएको उखुको रस मात्र सेवन गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले नकारात्मक असर पनि पुर्‍याउन सक्छ ।
कागतीपानी गर्मीको मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने घरेलु औषधि नै हो । शरीरमा भिटामिन सीको कमी हुँदा विभिन्न खालका समस्या देखिन सक्छ । कागतीपानीमा भिटामिन सीको मात्रा पर्याप्त हुने कारण बिरामी हुनबाट जोगाउन पनि उपयोगी हुन्छ । त्यस्तै पेटको खराबी भएमा, पेट फुल्ने समस्यामा, झाडापखालालगायतका समस्यमा कागतीपानीमा थोरै जिरा, हिङ, मरिच तथा नुन मिसाएर पिउनु लाभदायक हुन्छ ।
← वैदेशिक रोजगारी र नेपालको अवस्था	को हुन देउवालाई प्रश्न सोध्ने व्यक्ति ? यस्तो छ उनको ब्याक्तिगत नालिवेली ! – हेर्नुहोस् उनिसँग गरिएको ताजा कुराकानी →